Alhama de Granada | Vaovao momba ny dia
Sary | Mandehandeha Grenadian
Eo am-pototry ny Sierras de Tejeda, Almijara ary Alhama Natural Park dia ny tanànan'i Alhama de Granada, malaza amin'ny fandroana arabo mafana misy azy ireo any amin'ny sisa tavela amin'ny fandroana romana taloha ary avy eto dia mitondra ny anarany hatramin'ny al-Hama midika hoe "fandroana".
Alhama de Granada dia mety ho ny fijanonana manaraka amin'ny lalanao mamaky ny fanjakana Nasrid taloha, toy ny tamin'ny mpanoratra Washington Irving, izay raiki-pitia tamin'ny exoticism an'ny kolotsaina Hispano-Silamo nandritra ny taonjato faha-XNUMX ary nanangona ny zavatra niainany tany amin'ireo tany ireo mba hamoronana ny sanganasa "Cuentos de la Alhambra".
Alhama de Granada dia tanàna espaniola tsara tarehy izay manana toerana fizahan-tany maromaro. Tsy very maina ny ivon-toerany manan-tantara dia nambara ho toy ny zava-kanto manan-tantara. Raha mikasa fialan-tsasatra ho any Andalusia ianao amin'ny fialantsasatra manaraka, dia manorata!
4 Hopitaly Queen
5 Trano fanadihadiana
6 Fiangonan'ny nofo
7 Fiangonana- trano fivorian'i San Diego
8 Tetezana romana
9 Tsangambato voajanahary Tajos
Ao amin'ny tontolo iainana miavaka iray, voahodidin'ny hantsana, rano ary zavamaniry, ny Balneario de Alhama no iray amin'ireo toerana fitsidihan'ny mpizahatany. Ny spa dia nanolotra ny rano fanasitranana hatramin'ny vanim-potoana romana, fa ny fandroana mafana kosa dia namboarin'ireo Arabo tamin'ny taonjato faha-XNUMX teo ambonin'ny fandroana Romana taloha.
Ireto rano mafana itovizan'ny fanasitranana ireto dia mety amin'ny fitsaboana aretina toy ny aretin-tratra, osteoarthritis ary aretin'ny taovam-pisefoana. Noho izany, mandritra ny fitsidihanao dia tsy ho afa-mankafy ny toetrandro mahafinaritra sy ny tontolo miavaka ianao fa koa ny fandroana mamelombelona amin'ny endrika Nasrid madio indrindra, na dia nisy aza ireo maoderina hafa nampiana ireo teknika nentin-drazana.
Raha miresaka rano dia loharano i Caño Wamba amin'ny taonjato faha-XNUMX izay hita ao amin'ny tanàna tranainy izay ahitanao firesahana momba ny palitaon'ny Emperora Carlos V sy ireo fitaovam-piadiana taloha nampiasan'ny raibe sy renibeny, ny Monarchs Katolika.
Sary | Turgranada
Vato tsy ara-dalàna no nanamboarana azy teo ambonin'ny fiarovana mimanda taloha ary namboarina tamin'ny fiandohan'ny taonjato faha-XNUMX. Any afovoan-tanàna no misy azy saingy tsy afaka mitsidika ny atitany ianao satria fananana manokana.
Eo akaikin'ny Caño de Wamba no ahitantsika ny Hopitaly de la Reina, trano iray izay nibaiko ny mpanjaka katolika hanangana taorian'ny fakàn'ny tafika kristiana Alhama ny 1482.
Io no hopitaly voalohany natsangana tao amin'ny fanjakan'ny Granada tamin'ny alàlan'ny fanapahan-kevitry ny mpanjakavavy Isabel La Católica izay miahiahy momba ny fahasalamana sy ny fahasalaman'ny olom-peheziny sy ny miaramila. Raha ny marina, ny mpanjaka mihitsy dia nitsidika ny manodidina ny kianjan'ny ady nandritra ny Reconquest ary nanao fanomezana manan-danja amin'ny fitafiana, vola ary tranolay fantatra amin'ny anarana hoe hopitalin'ny Mpanjakavavy, izay nomeny ny zava-drehetra ilaina mba tsy hahita olana ny miaramila ao aminy. Misongadina amin'ny fampifangaroana ny maritrano Gothic, Mudejar ary Renaissance.
Ity toerana ity no sezan'ny Fitsaram-paritry ny fanadihadiana ary natsangana tamin'ny taonjato faha-XNUMX tamin'ny fomba gothic flamboyant. Any afovoan-tanàna manan-tantara no misy azy ary na dia tsy afaka mitsidika ny atitany aza ianao izao satria fananana manokana, mendrika ny handinika ny haingo ny ivelany.
Ny tilikambon'ny ben'ny tanàna Iglesia de Santa María de la Encarnación no mari-pamantarana hita maso an'i Alhama de Granada. Natomboka teo anelanelan'ny taonjato faha-XNUMX sy faha-XNUMX izy io. Ny rafitra ankapobeny dia Gothic.
Fiangonana- trano fivorian'i San Diego
Izy io dia tranom-pivavahana manana endrika baroque izay onenan'ireo moanina Fransiskanina tamin'ny taonjato faha-XNUMX, fa ankehitriny kosa dia vondron'olona masera Poor Clare no monina eto.
Ny tetezana romana an'ny Alhama de Granada dia natsangana tamin'ny taonjato XNUMX talohan'i JK tamin'ny andron'ny Emperora Octavio Augusto. Eo am-baravaran'ny tanàna eo amoron'ny ony Alhama no misy azy io ary teo no nisy ny fidirana.
Tsangambato voajanahary Tajos
Miatrika tsangambato voajanahary noforonin'ny andiana Tajos maromaro isika izay nateraka noho ny horohoron-tany maro sy ny fizotran-tany vokatry ny Reniranon'i Alhama. Ireo lohasaha lalina 50 metatra ireo dia mamorona endrika mahatalanjona ambonin'ny renirano sy Nosokajiana ho tsangambato voajanahary ao Andalusia izy ireo izay voajanahary.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tanànan'ny Espana » Alhama de Granada